Farshaxan ogeed waa mid aad loo jecel yahay waqti xaadirkaan, iyo sabab wanaagsan, waxa ay u muuqataa weyn, waxa aad u saamaxaaya in ay u sheegaan sheeko oo waa mid aad u badan oo ku haboon in YouTube, oo waa meel ka mid ah koritaanka fantastic sameeyo video.
In tutorial tan aynu doonayno inaynu u eegno waxyaabaha aasaasiga ah ee la abuurayo animation gaaban qoraalka ee 2D iyo waxa aalada yahay, waxaa ka.
Qaybta koowaad ee mashruuca waa in la abuuro asalkaaga iyo lakabka qoraalka hore. Marka la soo koobo taas waxaan isticmaalaa doono asalka ah madow iyo qoraalka oo u dhalaalaya sidii aan mari doonno. Marka hore, noo soo jeeda waxaa la abuuray oo isticmaalaya lakabka> cusub> adag, waxaan u isticmaali midabka madow cawlan halkan.
Waxay bixisaa markan in ay fikrad ah oo ku saabsan waxa ay tahay aad raadinayso in la sameeyo, waxaan doonayaa inaan kitaabkii duudduubnaa dhibic fudud qoraalka ah la hadal ma guurto ah 'Edge' la transformations gaararkiisa ah in la abuuro erayo cusub.
Abuurid wax text u Edge helo na diyaar u tahay inay bilowdo abuuro hadalkayagu play.
2. Abuuridda Kooban ee
Marka waxaan go'aansanay wixii aan la samayn, waxaan u baahanahay in la abuuro qoraalka qayb kasta oo aan u isticmaali doono in animation ah. Mid ka mid ah wax kasta gabal qoraalka.
Haa, waxa ay u muuqataa wax aan micne lahayn, laakiin koox kasta waraaqaha waa wax gooni ah in aan isku dari kartaa ula noqoto meesha ereyga 'laayeen' in la abuuro erayo cusub. Tani waa block dhismaha ee sida aan la abuuro naga farshaxan ogeed ah, sidaas darteed hadda waa inaan ka kooban ee aynu wadno.
3. Samaynta Keyframe ugu horeysay
Geedi socodka oo dhan ku dhisan tahay keyframes ah, kuwaasu waa calamada ee waqtiga loogu talagalay qayb kasta in uu kuu sheegayaa ka dib Dhibaatooyinka halkaas oo ay waa in la joogo in saxda ah. Ka dib markii xoog Raadka tahay awooddiisa ah inuu buuxiyo animation u dhexeeya keyframes kala duwan oo aad u dhigay, oo halkan waxaan ku qaadan doontaa faa'iido. , Sidaas si ay u bilaabaan aan la abuuro doono keyframe hore. Halkan waxaan ku noqon doono midka lakabka waxaan rabnaa iyo inta kale ee xog qarin, markaas dhig erayada ku bilaabatay sidii aan dooneyno.
Hadda, waxaynu haysannaa hadalka 'Wacadka', wuxuu ka kooban oo ka mid ah ay noqoto qoraalka 'Edge' iyo shayga firfircoon qoraalka 'PL'. Hubinta 'PL' lakabka waa firfircoon, waxaan markaas tegi karo goobaha ay waqtiga inay u beddesho> Jago halkaas oo aanu guji stopwatch ah in keyframe ugu horeysay ee shay.
Haatan waa inaan dhibic bilowga naga dhigay ilaa, si aan u soo guurto gal dhaqdhaqaaqa qaar ka mid ah.
4. U guuritaanka qoraalka
Hadda waxa aannu leenahay keyframe hore joojiyey mark 15 loox, waxaan ku noqon karaa 0 loox oo la abuuro keyframe cusub la 'PL' off sare ee shaashadda. Tani waxay siin doontaa saamaynta waxaa hoos u tagtey oo meel bilowgii xigaan. Tan waxaa loo sameeyey sidii hore, guuraan dulqabo markii in waqtiga, markii si bilow ah, ka dibna u guuraan shayga u barta loo baahan yahay. Keyframe ayaa lagu wadaa si toos ah.
Halkan waxa aad ka arki kartaa keyframe 1aad ganaya 15 jir ah in dahab.
Oo halkan waxaan arki set booska keyframe ah. Tani waa keyframe 2aad waxaan ku wadaa, laakiin ugu horeysay ee waqtiga, sidaas darteed tani waxay noqon doontaa meesha ka 'PL' bilaabataa waqtiga isku xigxiga.
Hadda waxaan eegi si ay u dejiyaan keyframes 3aad iyo 4aad our, Oo waxaa lagu sameeyey si la mid ah, la saddexaad dhexe iyo 4aad off shaashadda hoose.
Hadda waxaan ku leeyihiin siiqo ay meesha 'PL' ah UJEEDDO bilaabmay screen, dhibciyo hoos u galay meel, oo markaas lagu dhibciyo off shaashadda hoos. Waxa xiiso leh waa in aan nuqul karaa dhaqdhaqaaqa kuwa oo iyaga ka codsan in shay kasta oo kale, aan aragno sida ku haboon mashruuca.
5. Ku darista in ay waxyaabaha kale
Hadda, xulato kuwa 4 keyframes wada jir ahna aan nuqul karo, ka dibna iyaga paste ee waqtiga kasta waxaan jeclaan galay Click here for walxaha text kale. Haddii aan mowjadda 15 looxyada mar kasta, waxay abuuri karaan saamaynta waraaqaha tagtey hoos si ay u sameeyaan erayo cusub iyo garaaca kuwii hore off shaashadda.
Si aad nuqul ka keyframes fudud ah waana arrin la mid ah amar ama Control C, iyada oo ku xidhan madal, xulashada lakabka cusub, dejinta dulqabo markii barta saxda ah iyo la isticmaalayo amarka ama ay gacanta ku V in paste keyframes ee.
Waxaa laga yaabaa inaad la qabsato hooseysaa ku xiran tahay sida xarfaha aad tahay habaysan, laakiin tani waxay kuu ogolaanaya in aad si dhakhso ah loo abuuro saamayn xiiso leh.
Halkan aragtida waqtiga la gaarsiiyaa heerka ugu sarreeya si ay u oggolaadaan in aad aragto kooxo 4 keyframes iyo sida ay u habaysan waxay by iskusoo noqnoqonaya in ay oggolaadaan in muuqaalka kore ee erayga socda reebtay hore off shaashadda.
Tani ayaa muujineysa weli saamayn aan la abuuro sida PL lagu dhibciyo off shaashadda Dr qaadataa meeshiisii.
6. Text libdhi
Inteeda ugu dambeeyay waxa aynu eegi doonaa saamayn kale in uu yahay mid fudud in aad ku darto, laakiin aad wax ku ool. Si aan u dhammeys naga soo bandhigay wax yar waxaan rabnaa in aan aakhirka ereyada 'nolosha Live ah oo ku saabsan' muuqday soo socda in ay naga 'Edge' weligood ma guurto ah mar erayada dhaceen ayaa dhamaantood hoos u off shaashadda. Habka ugu fudud ee aad samaysid waxa ay u libdhi in.
Marka hore, waxaan abuurnaa Miciisa Text ereyada loo baahan yahay waa in.
Hadda, waxaan doonayaa inaan u muuqdaan ka dib markii si kale loo dhigo waxa ay ka baxeen oo, sidaas oo kalena haatan waxaan u leeyihiin in meel, waxaan doonaynaa in keyframe ugu horeysay ee wax tani tahay oo kaliya dhamaadka dhan animation kale. Dejinta curser ee keyframe ugu dambeeya ee erayga la soo dhaafay aanu ka dooro wax this, ka dibna dooran Opacity ka menu ka bedelaan, waxa ay qarka u saaran inuu 0%, taasoo la micno ah waa la arki karin, oo wuxuu u yeelay in sida keyframe ugu horeysay ee wax this.
Hadda mar kale aynu u dhaqaaqno dulqabo markii ay weheliyaan 15 looxyada, bedesho Opacity in ay 50%, dhigay keyframe ah, ka dibna u dhaqaaqo finalka samayn, 15 looxyada kale, bedesho Opacity in ay 100% iyo dhigay keyframe finalka.
Tani waxa ay keentey in weedha final engegay in meel dhamaadka.
Inkastoo, sida aan ka arki kartaa, saamaynta aan ku adag in la abuuro, ay aad wax ku ool u yihiin, iyo hab fiican si ay u abuuraan content indhuhu waa xaq oo ku saabsan isbeddellada hadda in daawadayaasha yihiin jeelahay.
Xulashooyinka kale ee la heli karo sida iska cad oo dhan waxaa loo isticmaali karaa si fiican, la siiyay iyo wixii la mid ah oo qayb ka ah mashruuca loo isticmaalo. Waxa intaa dheer oo dhan fursadaha 3D sidoo kale waxaa laga heli karaa sidoo kale in ay awood u fur on-dhidibka Z iyo sidoo kale fursado dheeraad ah sida dhaqdhaqaaqa camera ah ee dheeraad ah oo khibrad leh. Si kastaba ha ahaatee, inta halkan waxaan eegay aasaasiga ah ee farsamada, waxaa jira fursado ku filan si ay u sameeyaan mashruuc cajiib ah ka hor inta laabteen galay fursadaha badan oo horumarsan, xaqiiqda ah in ay la samayn karaa in waqti aad u yar oo kaliya qadar yar oo ah dadaal uu yahay bonus.
> Resource > Video > Sida loo sameeyo a ogeed farshaxan Video in dib markii Raadka